Accueil > Gazetin'ny nosy > Antsalova: Mangataka ny hiverenan’ny « adjudant » Patrice ny vahoaka
Antsalova: Mangataka ny hiverenan’ny « adjudant » Patrice ny vahoaka
Nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety omaly talata faha 06 febroary 2018 tetsy amin’ny « cafétaria » ny Antenimierampirenena ny depiote voafidy avy any Antsalova Ramarolahy Maurice. Noho ny raharahan’ny tsy fandriam-pahalemana izay mirongatra any an-toerana indray no nahatonga izao fanambarana izao. Tao anatin’ny enim-bolana izay nahatongavan’ity adjudant Patrice ao amin’ny zandarimaria ity dia nihena be ny asan-dahalo tany amin’ity distrika ity ny taona 2017 iny. Rehefa maro no dahalo azo sy maty dia tezitra ireo namany ka nanely tsaho ary misy mitory aty ambony koa fa manaonao foana ity zandary ity. Misy hatramin’ny olona ambony fianakavian’ny dahalo ireo avy any amin’ity distrika ity sy ny manodidina no mandefa fitarainana aty ambony. Tamin’ny taom-baovao 2018 teo dia maro koa ny vahoaka izay tonga nanatona ny depiote hilazany ny alahelony satria nandeha dia nandeha ny resaka fa ho esorina any Antsalova ity zandary mahery miady amin’ny dahalo ity noho ny fitoriana atao azy. Nahomby ny tetik’ireo dahalo sy ny mpangalatra ankehitriny ka dia voafahan-dalitra ny ao amin’ny zandary aty Antananarivo ka nandray tatitra diso. Nafindra toerana noho izany ity zandary ity efa ho 15 andro izao. Vokatr’izay hoy Ramarolahy Maurice depiote avy any Antsalova dia 13 sahady ny fanafihana nitranga ary olona 5 no maty.
Mangataka ny hamerenana azy ity depiote ity amin’ny anaran’ny vahoaka any Antsalova manontolo. Hisy fiantraikany amin’ny fifidianana any an-toerana ny raharaha hoy izy ary miantraika mivantana amin’ny fiainan’ny vahoaka amin’ny andavanandro koa.